Natombok’i Hong Kong ny tsy maintsy hiraketana ny tena anaran’ireo mpampiasa karatra SIM amin’ny finday · Global Voices teny Malagasy
Tsy mila fitsaràna, azo atao ny mahazo ny mombamomba anao
Voadika ny 01 Febroary 2021 16:39 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, Español, Deutsch, English, English
Sary an'i Andrey Metelev/Unsplash. Malalaka ny fampiasàna azy
Ny 20 Janoary teo, natomboky ny governemanta ao Honk Kong ny fakàna ny hevitry ny daholobe momba ny tolodalàna iray izay mety hitakiana ny tsy maintsy hanoratana ny anaran'ireo rehetra mampiasa karatra SIM amin'ny finday.
Nolazain'ny sekretera lefitra ao amin'ny sampana fiarovana any Hong Kong, Sonny Au Chi-kwong, nandritra ny antsafa iray ho an'ny gazety fa tanjon'ilay tolodalàna ny hiady amin'ireo fisandohana sy ireo heloka bevava hafa ampiasàna finday, toy ny fivarotana olona sy ireo fanafihan'ny mpampihorohoro.
Teren'ilay tolodalàna ireo rehetra mpampiasa finday ao Hong Kong, tafiditra amin'izany ireo SIM fahànana, mba hanome ny tena anarany feno, ny andro nahaterahana, ary dikan'ny karapanondrony eny amin'ireo mpanome tolotra. Ireo mampiasa SIM fahanana ho an'ny fandraharahany dia tsy maintsy misoratra anarana miaraka aminà karatra (lisansa) maha-pandraharaha.
Raha ankatoavina izy io, manana fepotoana hatramin'ny efatra volana ireo orinasa mpanome tolotra finday mba hametrahana angondrakitra iray misy ny torohay mahakasika ireo mpanjifany. Voatery ihany koa izy ireo hitahiry ireo rakitra mandritra ny taona iray raha kely indrindra aorian'ny tsy fampiasàna intsony ilay karatra SIM.
Ara-potokevitra dia tokony hitondra taratasy fahazoandàlana avy amin'ny fitsaràna ireo masoivoho mpampihatra ny lalàna vao afaka miditra amin'ilay angondrakitra, saingy mety ho azon-dry zareo atao ny tsy mandalo amin'izany fitakiana izany raha anatin'ny “toejavatra misy hamehana” fa mitondra fanekena avy amina manampahefana iray manana laharana ambony.
Amin'izao fotoana izao, misy 20,9 tapitrisa ireo fisoratana anarana amin'ny fampiasàna finday ao Hong Kong, ka 11,8 tapitrisa amin'ireo dia mpampiasa karatra SIM fahanana ary tsy mitonona anarana avokoa. Ny ambiny indray dia fifanarahana izay efa mila fitakiana fanoratana anarana ihany. 7,5 tapitrisa no isan'ny mponina ao Hong Kong.
Nandritra ireo hetsipanoherana ny fanolorana olomeloka, natao tamin'ny 2019, mba hiarovany ny mombamomba azy ireo dia marobe ireo mpampiasa finday no nampiasa laharana hafa tamina SIM fahanana. Ireo mpitsidika tonga avy any an-dranomasina ho ao Hong Kong koa dia mirona amin'ny fampiasàna SIM fahanana.
Raha nambara ho toy ny fakàna ny hevitry ny daholobe ilay drafitra, ny sekretera misahana ny fampiroboroboana ny varotra sy ny toekarena, Edward Yau, efa nilaza sahady fa “tsy safidy ny mijanona manohy ny efa misy ankehitriny.”
Maro be ireo mponina ao Hong Kong no velona ahiahy amin'ilay fanambaràn'ny governemanta hoe ho entina miady amin'ny heloke bevava no antom-pisian'ilay tolodalàna:
Tanaty dingana iray somary feno famoretana kokoa, mihevitra ny hampiditra ny fanoratana ny tena anaran'ireo mpampiasa SIM ny gov ao Hong Kong.
Raha jerena ny faharefoan'ny fiarovan'ny NSL ny zo fototra momba ny fiainana manokana … Dingana iray mazava mankany amin'ny fanarahamaso midadasika kokoa ny fifandraisana ataon'ny daholobe io. #MijoroMiarakaAminHongKong
— Xun-ling Au 歐迅灵 (@XunlingAu) 29 Janoary 2021
Dingana iray hafa sy goavana mankany amin'ny fanarahamaso tsy refesimandidy ataon'ny tanibe amin'ny ao Hong Kong ny fanoratana ny tena anaran'ireo mpampiasa SIM. Sarotra ny hieritreritra hoe tsy hisy ny fitoviany amin'ilay #GreatFirewall fanarahamaso ny aterineto ato anatin'ny taona iray eo ho eo, arahan'ny #SocialCreditSystem.
— Matthew Chapple 南丫華哥 (@LammaMatthew) 29 Janoary 2021
Tamin'ny 2010 no nanomboka tao Shina ny tsy maintsy anoratana ny anaran'ireo mampiasa SIM ary niandàlana no nampidiran'ireo manampahefana ny fampiharana azy mafimafy kokoa nanomboka teo. Nanomboka tamin'ny 2017, notakiana tamin'ireo rehetra mpanome tolotra aterineto sy ny sehatra rehetra anaty aterineto ny hanamarinan-dry zareo ny mombamomba ireo mpampiasa azy ireny, tamin'ny alàlan'ny andiana fepetra maro hafa.
Tamin'ny Desambra 2019, Makaô, tanàna iray eo ambanin'ny rafitra ‘Firenena iray , Rafitra roa”, dia nampiditra koa ny tsy maintsy anoratana ny tena anaran'ireo mampiasa telefaona finday, taorian'ny nanambaràna ny Tolodalàna momba ny Heloka an-tSerasera.
Ao Hong Kong, tsy ny olompirenena ihany fa hatramin'ny mpizahatany sy ireo mpampiasa avy any amin'ny tanibe Shina dia samy hovoakasik'io didy vaovao io avokoa rehefa mampiasa SIM fahànana mba handosirana ny sivana amin'ny aterineto amin'ny fampiasàna ny “data roaming”:
Marobe ireo mpikatroka avy any amin'ny tanibe Shina no efa nividy sahady karatra SIM voasokitra HK eo aminy, amin'izao fotoana dia tsy maintsy koa mitodika any amina làlana hafa izy ireny.
Na manana pôlitika mitovitovy amin'izany aza ny firenena hafa, azo atao ny mijery any ivelany mba hahitàna izay antony mahatonga azy io mety hanohintohina ny zon'ny vahoaka
— Pak Yiu (@pakwayne) 29 Janoary 2021
Satria ireo karatra avy any ampitan-dranomasina dia tsy iharan'io fanoratana anarana tsy maintsy atao io, efa azo iomanana sahady fa ho marobe ireo avy ao Hong Kong no hanomboka hampiasa ny “data roaming” mandalo amin'izy ireny.